Shikhar Post » इन्टर्नेशलन मार्सल आर्ट न्यूयोर्कद्धारा २ स्वर्ण सहिद ९ पदक जित्न सफल
इन्टर्नेशलन मार्सल आर्ट न्यूयोर्कद्धारा २ स्वर्ण सहिद ९ पदक जित्न सफल
न्युयोर्क । गत अक्टोवर ८, २०१७ मा भएका न्यूयोर्क ओपन च्याम्पियनसिपमा इन्टर्नेशलन मार्सल आर्ट एसोसिएसन न्यूयोर्कको तर्फबाट ७ जना विद्यार्र्थीहरुले भाग लिएकोमा ५ जनाले पदक जिन्न सफल भएका छन् । उनीहरुले २ स्वर्ण, ३ रजत र ४ कास्य पदक जितेका हुन् ।
विजयी खेलाडीहरुमा जेन्नी सीले काँतातर्फ स्वर्ण, कुमीतेतर्फ कास्य, कृष लामाले कार्तातर्फ स्वर्ण र कुमीतेतर्फ कास्य, शेनाज खानले कुमितेतर्फ रजत र कातातर्फ कास्य, फिन्चो शेर्पाले कातातर्फ कास्य र कुमितेतर्फ कास्य, पाल्देन शेर्पाले कुमीतेतर्फ कास्य जिन्न सफल भएका थिए ।
उक्त प्रतियोगिता वेस्ट चेस्टर कम्युनिटी कलेज न्युयोर्कमा रिकु बुजुत्सु केन्क्या डुयुकाई न्यूयोर्कद्वारा आयोजना भएको हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडिहरु गरी जम्मा ९ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको रहेको उक्त प्रतियोगितामा वल्र्ड कराते फेडेरेशन, पान अमेरिकन र यु.एस्. ए. नेशनल कराते फेडेरेशनका ६० जना निर्णायकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
इन्टर्नेशलन मार्सल आर्ट एसोसिएशन न्यूयोर्कको प्रतिनिधित्वमा यसअघि पनि धेरै पटक खेलाडीहरुले पदक जित्दै आएका थिए। यस प्रकारको सफलताले खेलाडिहरुको प्रोत्साहन बढेको एसोसिएशनका प्रमुख प्रशिक्षक तथा सञ्चालक सेन्सेई पर्खी खालिङ राईले शिखरपोष्टलाई बताउनुभयो । सो प्रतियोगितामा यस प्रशिक्षण केन्द्रका सेन्पाई दिपक राईले प्रशिक्षकको भुमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो ।